ခေတ်တခေတ် ပျက်သုန်းချိန် မှာ စီးပွားရှာနိုင်သူ (သို့) Covid-19 ကြောင့် ချမ်းသာ သွားသူ – Let Pan Daily
ခေတ်တခေတ်ပျက် သုန်းချိန်မှာ စီးပွားရှာနိုင်သူ ခေတ်ပျက် သူဌေး (သို့) Covid-19 ကြောင့် ချမ်းသာသွား သူတစ်ဦး…
သူ့နာမည်က အဲရစ်ယွမ် လို့ခေါ်တယ်။ မြန်မာပုံပြင်မှာ ကြွက်သေတခုအရင်းပြုလို့ ချမ်းသာတဲ့သူလို ကိုဗစ်ကြောင့် လူတိုင်း စီးပွားရေးကျနေချိန်မှာ သူကတော့ အအောင်မြင်ဆုံးစီးပွားရေးတခုကို ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ကိုဗစ်ကာလအတွင်း လူသုံးအများဆုံး ဗီဒီယို ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်တဲ့ ZOOM ရဲ့ CEO and Founder မို့လို့ပါပဲ။
NEW YORK, NY – APRIL 18: Zoom founder Eric Yuan makeatoast after the Nasdaq opening bell ceremony on April 18, 2019 in New York City. The video-conferencing software company announced it’s IPO priced at $36 per share, at an estimated value of $9.2 billion. (Photo by Kena Betancur/Getty Images)
သူက တရုတ်နိုင်ငံ ရှမ်ဒေါင်းပြည်နယ် ထိုင်အန်းမြို့ ဇာတိ။ သူ့ကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ မွေးတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် သူတက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်တဲ့အချိန် သူ့ရဲ့ရည်းစားဆီကိုသွားတဲ့ ၁၀ နာရီကြာ ရထားခရီးစဉ်မှာ ရထားစီးနေရင်း ဒီလိုအချိန်အကြာကြီး သွားတွေ့ရတာထက်စာရင် ဒီထက်ပိုမိုလွယ်ကူပြီး အချိန်မရွေး တွေ့ဆုံပြောဆိုနိုင်မယ့် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေး (Video Telephony) ဆော့ဝဲတခုကို တီထွင်ဖို့ စတင်စိတ်ကူးမိခဲ့ပါသတဲ့။
အဲလိုနဲ့ ရှမ်ဒေါင်းသိပ္ပံ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက်၊ ဂျပန်မှာ ၄နှစ်ကြာ အလုပ်သွားချိန် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာတော့ မိုက်ခရိုဆော့သူဌေးဘီလ်ဂိတ်စ်ရဲ့မိန့်ခွန်းကို နားထောင်မိရာကနေ အမေရိကန်ရဲ့ နာမည်ကျော်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေ ရှိရာ ဆီလီကွန်တောင်ကြားကိုသွားရောက် အခြေချ လိုစိတ်ကြောင့် ၁၉၉၇ခုနှစ်၊ သူ့အသက် ၂၇နှစ်အရွယ်၊ အမေရိကန်ဗီဇာ၉ကြိမ်မြောက်လျှောက်အပြီးမှာတော့ အမေရိကန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကို ရရှိခဲ့တယ်။
ဆီလီကွန်တောင်ကြားကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲတွေကို ရေးတဲ့လုပ်ငန်းကို စလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ WebEx ကုမ္ပဏီမှာ ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာဝင်လုပ်တယ်။ WebEx ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ Cisco က ဝယ်ယူပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ မှာ ဒုတိယဥက္ကဌ ရာထူးအထိ ရခဲ့တယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင်၊ စမတ်ဖုန်းတွေ ခေတ်စား လာတဲ့အချိန်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် Video Conference Appတခုကို ရေးသားပြီး Cisco ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့appကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ပယ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ဒီကုမ္ပဏီကနေထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ဖို့ပြင်ရာမှာ ရာထူးကောင်းကောင်း လစာကောင်းကောင်း ရနေတဲ့အချိန်မှကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို ပြန်စဖို့ရာကို သဘောသိပ်မတူတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကို” ဒါဟာအရမ်းခက်ခဲတဲ့ ခရီးရှည်ဖြစ်မယ်မှန်း ငါသိပါတယ် မိန်းမရယ် ၊ ဒါပေမယ့် ငါအခု ဒီလိုမလုပ် ခဲ့ရရင်တော့ တသက်လုံးနောင်တရနေတော့မှာပဲ” လို့ ပြောပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ ZOOM ကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ (ဒါကြောင့်မို့ ​ကောင်းတာ လုပ်နေသမျှ မိန်းမတားလဲလုပ်ပါ။ ဤကားစကားချပ်)
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲ ဈေးကွက်ထဲ ကိုရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် စစချင်းနှစ်မှာတင် လူသုံးများလာတဲ့ ဆော့ဝဲဖြစ်လာခဲ့ပြီး မေလမှာ ZOOM သုံးစွဲသူပေါင်း ၁သန်းအထိ ရှိလာခဲ့တယ်။ နောက် ၄နှစ်အကြာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ZOOM ကုမ္ပဏီဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဘီလျံ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၂၀၁၉ ဧပြီလမှာ ကုမ္ပဏီကို အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းခဲ့ပြီးနောက်၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန် ကိုဗစ်နိုင်တင်းစတင်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာတော့ သုံးစွဲသူပေါင်း ၁၀ သန်းအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မတ်လ မှာတော့ သုံးစွဲ သူပေါင်း သန်း ၂၀၀ အထိ တမဟုတ်ချင်းတက်လာတာနဲ့အမျှ ZOOM ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာဈေးဟာလည်း တရှိန်တိုးမြင့်တက်လာခဲ့တယ်။ ဒီဆော့ဝဲဟာ လုံခြုံရေးစိတ်မချရဘူးဆိုတဲ့ ထောက်ပြဝေဖန်သံတွေထွက်ခဲ့ပေမယ့် သုံးစွဲသူတွေ ဟာ တိုးလာဆဲ တိုးမြဲဖြစ်နေကာ လူသိအများဆုံး ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးဆော့ဝဲတခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာတန်ဖိုးဟာ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလမှာ ဒေါ်လာ ၇၀အောက်သာ ရှိခဲ့ပေမယ့် မတ်လကုန်မှာတော့ ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဖြစ်သွားပြီး ၃လအတွင်း ၂ဆကျော် ခုန်တက်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် ဝန်ထမ်း ၂၅၀၀ ကျော်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ ၄၂ဘီလျံ အထိဈေးကွက်တန်ကြေးရှိသွားပြီဖြစ် သလို တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ အဲရစ်ယွန်ဟာလည်း ၁နှစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၈ဘီလျံကြွယ်ဝလာကာ တည်ထောင်ပြီး၉နှစ်အကြာမှာတော့ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၃၀၀ စာရင်းထဲကို ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
” ခေတ်တခေတ်ပျက်သုန်းချိန် နဲ့ ခေတ်တခု ထူထောင်ချိန်ဟာ စီးပွားရှာ လို့အကောင်းဆုံးပဲ” လို့ စာရေးဆရာမ မာဂရက်မစ်ချယ်ရဲ့ Gone with the wind (ဆရာမြသန်းတင့်မှ လေရူးသုန်သုန်လို့ ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့) စာအုပ်ထဲက ဇတ်ကောင် ရတ်ဘတ်တလာ ပြောခဲ့သလိုပဲ အကျဉ်းအကျပ်ထဲမှာပေမယ့် ခေတ်ကာလ ကိုအသုံးချ တတ်ရင် အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ အဲရစ်ရဲ့ ဇတ်လမ်းကနေပြောပြနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ Entrepreneurship နဲ့ Innovator တွေ မြန်မာပြည်မှာလဲများများရှိဖို့ရည်ရွယ်ရင်း ဒီစာရေးပါတယ်။